देश टुक्राउन खोज्ने जो कोहीलाई सरकारले नछाडिने–दाहाल सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने – Maitri News
देश टुक्राउन खोज्ने जो कोहीलाई सरकारले नछाडिने–दाहाल सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने
काठमाडौ। देशको स्वाधिनता विरुद्ध बोल्ने र देश विखण्डन पार्न खोज्ने जो कोही उपर पनि राज्य र सरकार कठोर बन्ने भएको छ। देश टुक्राउन खोज्ने कसैलाई पनि नछाडिने र उनीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौवाट चितवन पुगेर बुधवार चितवन औद्योगित प्रदर्शनी केन्द्रको भरतपुरमा शिलान्यास गर्ने क्रममा कडकिदै देश टुक्राउन खोज्ने कसैलाई पनि नछाडिने चर्को भाषण गरेका छन्। लोकतन्त्रमा देश टुक्राउने कुरा गर्नेलाई छुट दिन नसक्ने भन्दै त्यसउपर सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने कुरा पटक–पटक दोहोर्याउन चुकेनन्।
देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिदै राज्य र सरकारलाई पटक पटक चुनौति दिदै आएका सीके राउतलाई सरकारले पक्राउ गरेतापनि त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले खासै बोलेका छैनन्। राउतलाई सरकारले के गर्छ र गर्दैन भन्ने बारेमा नेपाली जनतामा व्यापक उत्सुकता देखिएतापनि यस कुरालाई प्रधानमन्त्री दाहालले भाषणका क्रममा खासै नबोल्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ।
देश टुक्राउन खोज्ने सीके राउत जस्तालाई कानूनको घेरामा ल्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागू हुने हो या होइन ? त्यो आशंकाको घेरामा रहेको छ। भाषणमा व्यक्त गरेजस्तो कुरा व्यवहारमा लागू गर्नसक्ने राजनेता नेपाललाई चाहिएको छ। त्यो राजनेता दाहाल हुने हो या होइन ? प्रश्न नै प्रश्न वीच प्रधानमन्त्री दाहाल रहेका छन्।